बैशाख ३०, २०७६, सोमबार
"सरकार हामीलाई यही रासन पनि बढी भएको छ । रासन वृद्धिको आशा गरेका छैनौं ।" आफ्नै रासनभत्ता बढेकोमा दु:खी हुँदै एक प्रहरी जवानले गुणासो सुनाए, "रासनभत्ता हाम्रो चाहना होइन, तलब वृद्धि चाहेका छौं । हामीले रासनको कुरा उठाएकै छैन । उठाउँदै नउठाएको यो भत्ताको कुरा कहाँबाट आयो सरकार !"
तलबभत्ता कि रासनभत्ता ?
तलबभत्ता कि रासनभत्ता बढाउनु पर्‍यो ? यी दुईमा अप्सन आयो भने सुरक्षा निकायका कतिपय उच्च अधिकारीहरुको छनोट रासनभत्ता हुँदो रहेछ । अनि तल्ला तहका निम्छरा सुरक्षाकर्मीहरुको चाहना चाहिँ तलबभत्ता हुनेरहेछ । किन ? माथिका भनाइले नै पुष्टि गर्छ ।
गृहमन्त्रालका सहसचिवको नेतृत्वमा बसेको रासन पुनरावलोकन समितिले तीन वटै सुरक्षा निकायका कर्मचारीको रासनभत्ता २० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेसँगै तल्ला तहका धेरैजसो सुरक्षाकर्मीहरु खुसी छैनन् । दु:खी छन् ।
सामान्यतया यसरी रासनभत्ता बढ्दा खुसी हुनुपर्ने हो । रासनभत्ता शासनभत्ता हुनेरहेछ । त्यसकारण उनीहरु खुसी छैनन् । उनीहरुले रासनभत्ता जति बढे पनि यो हाकिमका लागि हुने बताएका छन् ।
वि.सं. २०७२ सालमा सरकारले सुरक्षा निकायको रासनभत्ता ५ हजार २ सय ५० निर्धारण गरेको थियो । सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको चार वर्षपछि यो पहिलोपटक रासनभत्ता बढ्न लागेको हो ।
यो प्रस्ताबले तलब बढ्ला भनेर आशामा रहेका कतिपय सुरक्षाकर्मीहरुलाई अहिले दु:खी बनाएको छ । नेपाली सेनाका एक जवानले फेसबुक कमेन्ट लेखेका छन्, "सेनाको रासनभत्ता बढेर मात्र के गर्नु । यो सब मिलाएर ठेकेदार अनि हाकिमले खाने हो ।"
रासन ठेक्कापत्तामा पनि घोटाला भएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसमा कतिपय सुरक्षा निकायका हाकिम र ठेकेदाहरुको मिलेमतो हुनेगर्छ । टेन्डरमा पनि खेल हुँदै आएको छ । यसबाट सुरक्षाकर्मीहरु आजित छन् ।
"तलबमा बृद्धि गर । नत्र त्यो रासनभत्ता चाहिँ हाकिमको लागि मात्र हो ।" फेसबुक नाम शेर दिप्सन भएकाले सुझाबमा लेखेका छन् ।
श्रम ऐनअनुसार श्रमिकले दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढी समय काम गरेमा त्यहीअनुसारको सेवासुविधा पाउनुपर्ने हो । तर, सुरक्षा निकायहरुमा यसलाई अलिक ब्यवहारिक मानिन्न । धेरै समय खट्नुपरेकोमा पनि सुरक्षाकर्मीहरुको गुणासो छ । सेना, शसस्त्र र जनपथले २४ सै घन्टा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यसैअनुसार सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । दैनिक ८ घण्टा ठीक छ । उनीहरुले स्वीकारेका छन् । बाँकी १६ घन्टाको सेवासुविधा नपाएको उनीहरुको गुणासो छ ।
नाम नभन्ने सर्तमा एक जवानले भने, "रासन बढ्ने भएछ । अधिकृतहरुको भोज सुरु हुन थाल्यो होला ? किरा परेको चामल जवानलाई । हाकिमको चामल ५ केजीको सुनौंलो पोकामा । हामीले खाने भात अरे । उनीहरुले खाने भुजा अरे । जवानलाई भान्सा । उनीहरुको चाहिँ मेस भन्नुपर्ने, हैट ।"
सुरक्षा क्षेत्रमा तल्ला तह र माथिल्ला तहका लागि गरिएको विभेदप्रति आजित भएर प्रतीक क्षेत्री (फेसबुक नाम) लेख्छन्, "भन्नु भात्र गुणस्तरीय रासन । यहाँ त ठेकेदारले कतिसम्म हर्कत देखाउँछन् । भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।"
सुरक्षा निकायका केही हाकिमहरुलाई रासनभत्ताले दोहोरो फाइदा हुने गर्छ । रासन ठेकेदारका पनि हात चाट्न पाउँछन् । यता मेसमा राम्रा चामल लुकाएर कमसल चामल पकाउँदा पनि मालामाल हुँदा रहेछन् । त्यस्ता हाकिमहरुलाई संकेत गर्दै एमबी गुरुङ लेख्छन्, "हैलौ सरकार ! ठूलाको दुबै हातमा लड्डु हुने । यहाँ जवानहरु मरेको मरै गर्नुपर्ने । हाम्रो नानीहरुलाई के खुवाउनु ?"
प्रेम माली क्षेत्रीले रासन बढे पनि नबढे पनि सिपाहीले खाने चामल उही हो, भत्ता बढ्यो भनेर सरकारले केको फुर्ती लगाउनू । तीनै तहका सुरक्षा निकायका धेरै जसो जवानहरु रासनको पैसा बढाउनुभन्दा तलब भत्ता बढाएको भए धेरै राहत हुने बताएका छन् ।
कतिपय ठेकेदारहरुले कमसल खालका चामलहरु ब्यारेकमा ढुवानी गर्नेछन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा रासन बापतको रकम बैंक मार्फत भुक्तानी हुँदै आएको छ । तर त्यसरी भुक्तानी भएको पैसा पनि मेसमा बुझाउनुपर्नेहुन्छ । रासनभत्ता जति बढाए पनि सबै पैसा खाताबाट निकालेर मेसमा बुझाउनुपर्छ । काम छैन रासन बढाएर । सबै पैसा झिकेर हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ । पैसाजति हाकिमलाई ।
रासनको 'आइटम' घटाएर तलब वृद्धि गरे तल्लो दर्जालाई राहत मिल्छ । सरकारले निर्धारण गरेको रासन 'स्केल'अनुसार नेपाल प्रहरीलाई १४, सशस्त्र प्रहरीलाई १८ र नेपाली सेनालाई १९ थरीका रासन स्केल प्रदान गर्दै आएको छ ।
के छ हालको रासन स्केल
नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५४ संख्या २६ मिति २०६१ असोज २५ गतेको गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार रासन स्केल निम्न बमोजिम रहेको छ ।
स्रोत : नेपालपुलिस डटकम